Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်၏ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ် (၁၀-၁၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်၏ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ် (၁၀-၁၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လန်ဒန်မြို့ Heathrow လေဆိပ်သို့ ၁၀-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ၁၉:၁၅ နာရီတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
လေဆိပ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းနှင်‌့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick တို့မှ ခရီးဦးကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား တည်းခိုမည့် Dorchester Hotel တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီး H.E. Mr Sayakane Sisouvong ၊ ASEAN-London Committee (ALC) အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Rizal Sukma ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရူနိုင်း High Commissioner ဖြစ်သူ H.E. Major-General Dato Amiuddin Ihsan ၊ သံအမတ်ကြီးဦးကျော်စွာမင်း၏ ဇနီး၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်ဆွေနှင်‌့ ဇနီး နှင့်သံရုံးဝန်ထမ်းများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၁-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် လန်ဒန်မြို့၊ မြန်မာသံရုံး၌ ဥရောပဒေသနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီး (၁၂) ဦးနှင့် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၄:၃၀နာရီအထိ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ကမ႓ာ့နိုင်ငံများအားလုံးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနိုင်ရေးအတွက် ဘက်မလိုက်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာသံရုံးများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်တို့ကို မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးများမှလည်း သက်ဆိုင်ရာ၊ မြန်မာသံရုံးများ၏ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သံအမတ်ကြီးများနှင့်အတူ မြန်မာသံရုံးတွင် နေ့လယ်စာသုံးဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Rt. Hon. John Bercow နှင့် လည်းကောင်း၊ Royal College of Defence Studies (RCDS) တွင် Commander of Joint Forces Command General Sir Christopher Deverell ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး Sir Tom Phillips တို့ နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြီးသည့်နောက်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် RCDS ၌ပညာသင်ကြားလျက်ရှိ သည့် မြန်မာနို်င်ငံမှ သင်တန်းသားနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မြင့်ဦး၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်၊ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးမိုးဇော်ဦး အပါအဝင် ဗြိတိန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများအား ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Lancaster House ၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rt.Hon. Mr. Boris Johnson မှ တည်ခင်းသည့် နေ့လယ်စာ စားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
နေ့လယ်စာ စားသုံးစဉ်တွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့်ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၃-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် No.10. Downing Street ရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ နေအိမ်၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Rt. Hon. Ms.Theresa May နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ချောမွေ့သည့် နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်းတို့အတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လိုအပ်မည့် ကဏ္ဍများတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ကူညီပေးရန်အတွက် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်အတွက် မကြာမီကာလအတွင်း လန်ဒန်မြို့တွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကွန်ဖရင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လူငယ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အခြေခံပညာအဆင့်မှစတင်၍ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျန်းမာရေး နှင့်ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် နည်းပညာ နှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများအတွက် ကူညီမှုများ ရရှိရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုနောက်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၃:၀၀ နာရီတွင် Palace of Westminster တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး Ms. Priti Patel နှင့်လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်မြို့သို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ရန်အတွက် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၇:၄၀ နာရီတွင် လန်ဒန်မြို့ Heathrow လေဆိပ်မှ ဗြိတိသျှလေကြောင်းဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မြို့သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။
သတင်းဓာတ်ပုံ- မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့